Ukufundisa umngani ukupheka kwamnikeza isu lebhizinisi
UMOGAU Seshoene waseTurfloop onencwadi yokupheka ehamba phambili ngokudayisa kuleli iThe Lazy Makoti. Isithombe: Sithunyelwe
PHUMELELE NXUMALO | September 13, 2019
OKWAQALA njengekilasi lokufundisa umngani wakhe ukupheka sekumenze omunye wabesifazane abanohlonze kwezokupheka. .
UMogau Seshoene (30) ongowokudabuka endaweni yaseTurfloop eMakweng eLimpopo, ungumsunguli nomlobi wencwadi esihloko sithi “The Lazy Makoti”.
USeshoene uthi uthando lokupheka into aqala kudala ukuba nayo kanti okwamholela ekusunguleni ibhizinisi kwaba ngukufundisa umngani wakhe ukupheka.
“Omunye wabangani bami wayezoshada kanti kwakuzomele ahehe abasemzini ngokupheka kwakhe kodwa engakwazi ukupheka. Wangicela ukuthi ngimfundise ukupheka ukudla kwesintu. Ngathi sengimfundisile wabe esetshela abanye abantu ngekhono lami lokupheka nokuyilapho engaqala khona ukufundisa abantu ukupheka ngezimpelasonto,” kusho uSeshoene.
USeshoene uthi enye yezinselelo abhekana nayo ngesikhathi esebhale incwadi yakhe kwaba ukuthola umshicileli. Uthi abashicileli ayehlangana nabo babemeluleka ngokuthi ashintshe indlela apheka ngayo kungabi eyesintu kuphela kepha ahlanganise isintu nesilungu.
“Abashicileli babengitshela ukuthi abantu baseNingizimu Afrika ngeke bayithenge incwadi enokudla kwesintu kuphela. Ngagcina ngimtholile umshicileli engizosebenza naye kanti incwadi yami iyona ehamba phambili ngokudayisa eNingizimu Afrika,” kusho yena.
Le ntokazi ithi okwayenza yakhetha ukufundisa ngokudla kwesintu ukuthi yayibona ukudla kwesintu kunganakiwe kuleli kunakwe okwamazwe anjengo-Italy, America namanye.
“Ngesikhathi umngani wami ezoshada wazama ukuthola indawo noma incwadi engamfundisa ukupheka ukudla kwesintu kodwa kwangungekho lutho ethinta ukudla kwakuleli yonke into yayithinta ukudla okuphekwa kwamanye amazwe. Ngesikhathi ngenza ucwaningo ngathola ukuthi amanye amazwe ayazama ukugcina ukudla kwawo okungamagugu kepha eNingizimu Afrika akwenziwa lokho,” kusho uSeshoene.
“Abantu abasha abafundi ngokwanele ngamagugu ethu. Njengamanje eNingizimu Afrika ukudla lokhu esikudla nsuku zonke akukona okwethu okwamanye amazwe. Uma singawanakekeli amagugu ethu azosilahlekela njengoba sesilahlekelwe nawulwimi lethu kanye nezimpahla esizigqokayo.”
USeshoene uthi uhlele ukuqala ukubhala incwadi yakhe yesibili ngonyaka ozayo. Okunye anesifiso sokukwenza ukuba nohlelo lukamabonakude azofundisa kulona abantu ukupheka ukudla kwesintu, kanti unethemba lokuthi nakho lokhu kuzofezeka maduze. Incwadi kaSeshoene iThe Lazy Makoti iyatholakala ezitolo eziningi ezahlukene ezidayisa izincwadi.